Keywan Karimi ao Iran: Mpamokatra Sarimihetsika Sady Artista Graffiti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2016 7:24 GMT
Seho avy amin'ny horonantsary fanadihadian'i Keywan Karimi “Manoratra ao An-tanàna” notontosaina tao Sadat Abad, Tehran, Iran. SARY: Arxe2014, Wikimedia Commons
Avy amin'i Mahdi Ganjavi
Nalefa voalohany vao haingana nandritra ny Herinandron'ny Tsikera tamin'ny Fetiben'ny Filma Venizy ny Drum, filma notontosain'ilay Iraniana mpamokatra sarimihetsika Keywan Karimi. Nosazian'ny fitsarana tao Iran 6 taona an-tranomaizina i Karimi noho ny votoaty ara-politika tamin'ny lahatsary fanadihadiany teo aloha, “Manoratra ao an-tanàna” (2015), namokatra ny Drum izy teo am-piandrasana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana.
Tamin'ny 6 Aogositra, andro vitsivitsy taorian'ny nanambaràna ny fandaharana hanaovana ny Herinandron'ny Tsikera Venizy, namoaka lahatsoratra lavabe manameloka ny fetiben'i Venizy tamin'ny fifantenana ny Drum ny Vatan Emruz, gazety mpandala ny mahazatra mpivoaka isan'andro ao Tehran. Nampahatsiahy ny mpamaky ny lahatsoratra fa voasazy noho ny fanatontosana lahatsary fanadihadiana nanohana ny fitroarana taorian'ny fifidianana tamin'ny 2009 i Kamiri, ary naneho hatezerana fa “raha tokony hiaritra ny didim-pitsarany izy, dia ” efa nanatontosa filma hafa sahady i Karimi!”
Tsy i Karimi no Iraniana mpamokatra sarimihetsika voalohany manohy ny asany na dia teo aza ny teritery ara-pitsarana. Nosamborina tamin'ny 2010 i Jafar Panahi sy Mohammad Rasuolof noho ny “fanaovana filma tsy nahazoana alalana”, izay nahazo sazy ara-pitsarana henjana kokoa kanefa mbola nanohy nanao sarimihetsika.
Ny fikasana voalohany indrindra tamin'ny lahatsoratry ny Vatan Emruz dia ny hanala baraka ny fetibe “Tandrefana” ho manohana horonantsary avy amin'ny “mpamokatra tsy manara-dalàna” izay “manaratsy” an'i Iran. Niaiky- ny lahatsoratra, na dia izany aza, fa mirongatra amin'ny Sinema Iraniana ny fomba amam-panao vaovao ary nanonona ny “Drum” (2016), Taxi an'i Jafar Panahi (2015) sy Manuscripts Don’t Burn [tsy may ny taratasy nosoratana] an'i Mohammad Rasoulof (2015) ho ohatra amin'ity hetsika vaovao ity izy.
Sarimihetsiky ny Voahilikilika
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Keywan Karimi, mpitantara ny rindrin'i Tehran”, mandresy lahatra i Maryam Hanifi sy i Azad Aziziyan fa azo zaraina ho sokajy telo ireo mpamokatra sarimihetsika taorian'ny revolisiona ao Iran: propagandista, mpitsikera ara-tsosialy amin'ny antonony, ary mpitsikera ara-tsosialy mahery fihetsika. Ny asan'ity fahatelo ity sy vondrona vao haingana indrindra ity, araka ny filazan'ny mpanoratra, dia mandrafitra ny “Sinema ho an'ny voahilikilika”, ary milaza izy ireo fa anisan'ity andiany ity ny sangan'asan'i Karimi.
Satria miombon-kevitra amin'i Hanifi sy Aziziyan aho fa nirongantra teo amin'ny sinema Iraniana ny vondrona vaovao misy ireo mpamokatra sarimihetsika mahery fihetsika. Amiko, ny hevitra “Sineman'ny voahilika” dia tokony hivelatra, samy mandray ao aminy ny fomba amam-panao naharitra ela amin'ny karazana sarimihetsika tahaka izany ao Iran izy roa ireo, sady manavaka ireo ohatra talohaloha kokoa amin'ny fiovàna izay nitranga taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2009.
Mpitsikera ny ara-tsosialy ny maro amin'ireo Iraniana mpanatontosa sarimihetsika, ary nanatontosa sarimihetsika milaza ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina voahilika: Suhrab Shahid Sales sy Amir Naderi no tonga ao an-tsaina amin'izany. Taorian'ny revolisiona tamin'ny tamin'ny taona 1979, nandao an'i Iran ny sasany tamin'izy ireo—Naderi, ohatra—.Ny hafa, tahaka an'i Nasir Taqwa'i kosa nitsahatra tamin'ny fanaovana sarimihetsika. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, satria nanamora kokoa sy azo nidirana kokoa amin'ny fanaovana filma ny teknolojia nomerika, dia niaina zava-baovao ity karazana sinema ity. Noho ny firaisankinan'ireo mpamokatra sarimihetsika any amin'ny firenena hafa sy ny fanohanan'ny fiarahamonim-pirenena Iraniana, sahy nihantsy ireo teritery ara-pitsarana sy ara-politika ny vitsivitsy tamin'ireo mpamokatra voaràra ary nanatontosa horonantsary.
Manaporofo ny mahalonaka ny toerana hanatontosana filma “tsy hivangongo” eo amin'ny lafin'ny angeso sy teknika ny tsy maha-ara-dalàna ny famokarana ireny horonantsary ireny. Mampiseho ny fampitahana fohy eo amin'ny sangan'asan'i Jafar Panahi sy Keywan Karimi fa nisy fiantraikany tamin'ny endrika sy ny firafitry ny horonantsarin'izy ireo ny fepetra iainan'izy ireo.
Tsy ny sarimihetsik'i Panahi rehetra no tafalatsaka ao anatin'ny sokajy “Sineman'ny voahilika”, fa ny telo amin'ireo sangan'asany vao haingana: This is Not a Film [Tsy Filma ity] (2011), Closed Curtain [Lambam-baravarana Mikatona] (2013) ary Taxi (2015). Panahy no Tompon'ny “factasy” i Panahi, teny noforonin'ilay mpitsikera ara-kolontsaina Hamid Dabashi mba hilazana ny fitambaran'ny zava-misy sy ny haitraitra. Noho izany, manan-trosa be amin'i Panahi i Abbas Kiarostami. Voaràran'ny lalàna Iraniana tsy hanao sarimihetsika, nifototra tamin'ny fiainany manokana, na izany aza, ireo fitantarana vao haingana nataon'i Panahi, lasa misalotra ny “mpanatontosa mpandika lalàna” ao Iran amin'izao fotoana. Amin'ny fampiasana “factasy” ho teknikam-pitantarana, nahavita nanolotra tsikera ara-tsosialy sahisahy izy.
Tsy tahaka an'i Panahi, saika ny sarimihetsik'i Kamiri rehetra no azo lazaina fa ao anatin'ny sokajy “Sineman'ny voahilika”. Fitaratra amin'ny antony maro eo amin'ny angeso ny sangan'asany. Voalohany, nosoratana sy notontosaina nandritra ny fotoana nampanantsoana azy ho atao famotorana, na hiatrika fitsarana ireo filma ireo. Mpikambana avy amin'ny vondrom-piarahamonina voahilika ireo mpandray anjara miaraka aminy: mpiambina amin'ny alina (The Adventure of Married Couples na Ny zavatra sedrain'ireo mpivady); Kiorda Mpanao trafikana etona fandrehitra (Broken Border na Sisintany Vaky); Mpanakanto graffiti (Writing on the City na Manoratra ao an-tanàna); miaramila efa misotro ronono namoy ny nofinofiny sy ny tranony noho ny horohoron-tany (Anti-Earthquake Conex na Tambajotra miady amin'ny horohorontany).
Tsy mampihena ny fanambin'ny fiarahamonina Iraniana amin'ny ady “ara-kolontsaina” tsotra eo amin'ny fomban-drazana sy ny maoderina i Karimi. Manasa ny mpijery izy mba hijery lalina, amin'ny fifandraisana anatiny eo amin'ny kolontsaina sy ny fepetra iainana amin'ny fanatontosana sarimihetsika, mamaky lay ny lalana, ohatra, fa ny fankamamiana ny fiainana dia manimba ny fahazoam-bola ivelomana (Ny zavatra nosedrain'ireo mpivady); sy ny mety hamoizan'ny olona ny ainy (Sisintany Vaky); na ny hetaheta hitaky ny filàna mahaolona voaràran'ny lalàna (Fifandraisana Miady amin'ny horohorontany). Manohitra ny fomba fitantarana ofisialy amin'ny famelomana indray ireo tantara ara-politika nampahory hatrany (Manoratra ao An-tanàna) ihany koa izy ireo.
Inona no tanjon'ny “Sineman'ny voahilika”? Nandresy lahatra i Behruz Safdari, mpandika teny, fa zava-kanto “ôrizinaly” ny sarimihetsik'i Keywan Karimi izay manasa ny mpijery azy mba tsy ho lasa hahatsapa fotsiny ny manodidina azy fa hanova azy ireo koa. Araka ny filazan'i Ardawan Tarakemeh mpanatontosa sarimihetsika sy mpanao tsikera, tamin'ny fanolorana tanàna iray “ny tena fanontaniana dia tanànan'iza no nisoloan-tena. Tanànan'ny saranga antonontonony sa sarangan'ny madinika antonontonony? Sa tanànan ‘ny mahantra, ny voahilikilika? Ho an'iza no hanehoana azy? Ary hanohitra an'iza? ” Nilaza i Tarakemeh fa ny tanàna izay aseho amin'ny sarimihetsik'i Kamiri dia tanànan'ny voahilika—izay matetika voafafan'ny solontena ara-potokevitra ofisialy.
Drum: Sinema itatry ny Graffiti
Mifototra amin'ny tantara foronina nosoratan'i Ali Morad Fada'i Nia ny Drum. Nosoratana tamin'ny taona 1960, nitranga nandritra ny maodernizasiona nateraky ny firoborobon'ny solitany tao Tehran ny tantara, amin'ny fomba fijerin'i Karimi, dia manana akony mahery avy amin'ny fifampiraharahana Ara-nokleary tao Iran io vanim-potoana io, satria samy namihina ny nofinofin'ny renivohitra ireo fotoana roa ireo—”tsara kokoa isika raha manankarena kokoa “—miteraka ” kolontsain'ny fitiavam-bola.” Ho an'i Karimi, na dia tsy noraharahian'ireo indray nihira taminy aza i Fada'I Nia, dia mbola anisan'ireo avara-pianarana vitsy tamin'ny taompolo 60 nanakiana tanteraka ny rindra ara-piarahamonina vokatry ny kapitalisma izy.
Ao amin'ny Drum, izay mifototra amin'ny fanaovana saripika, manasa antsika i Karimi hankafy ny hatsaran'ny sarimihetsika, no sady mametraka ankamantatra amintsika ny fizotry ny tantara. Nahazo fonosana avy amin'ny lehilahy izay vao nisy namono ny mpisolovava iray. Norahonan'ny andian-jiolahy manampahefana tsy manara-dalàna ity mpisolovava ity, notazon'ilay mpisolovava hatrany ilay fonosana, mandra-pahatongan'ny fandrahonan'ny andian-jiolahy hamonoan'izy ireo ny olo-malalany. Amin'ny fanehoana tontolo saro-takarina, tontolo tsy mety lany fotoana sy tahaka ny ao amin'ny nofy, lazain'i Marimi ao ny tantaran'ny fampahoriana sy ny fifikiran'olona iray hijoro miafara amin'ny voina tampoka tsy misy dikany sy fandresena tsy mahafaly ho an'ilay mpandray anjara fototra. Vitsy ny fifanakalozan-kevitra, ary miadana dia miadana ny fizotrany, mampiako ny fomban'ny mpanatontosa sarimihetsika tahaka an'i Aki Kaurismaki sy Bela Tarr.
Noho ny teritery tamin'ny fanatontosana ny Drum, namaritra ny fomba fandravahany toy ny “krizin'ny fanatsaran'endrika” i Karimi. Tamin'ny resadresaka niarahako tamin'ity mpanatontosa sarimihetsika ity, nanontany azy ny dikan'izany aho: “Mino aho fa misy ny fironan-tranga vao niseho,” hoy izy tamiko.
“Nitranga izany vokatry ny fivoarana tato ho ato, tsy tao Iran ihany fa maneran-tany. Izany no toetry ny krizy izay miorim-paka manerana izao tontolo izao. Ny tiako lazaina dia hoe krizy araka ny fanazavan'i Agamben azy, midika hoe toetra vokatry ny fampiatoana lalàna.
“Mety miato indroa eo amin'ny fiarahamonina iray ny lalàna. Ny voalohany rehefa mampiato azy amin'ny alalan'ny revolisiona ny olona. Ny faharoa dia ny lalàna ihany no mampiato azy hametrahana fanjakana polisy. Ao anatin'izany toetry ny krizy izany, tsy misy ny zavatra azo vinaniana mialoha, na dia nofantarina mialoha aza ny zavatra rehetra. Nandritra ny enina na fito taona farany, nametraka ny tenany teo amin'izao tontolo izao, sy tao Iran ihany koa ny fanjakana polisy. Mifampiahiahy ny olona rehetra. Mety mitranga amin'ny fotoana rehetra ny zavatra iray. Ny asa kanto vokarina amin'ity vanim-potoana vao haingana ity dia tokony hipongatra avy amin'ity toetry ny krizy ity; izay midika fa tsy maintsy manana karazana krizin'ny hatsarana izy ireo, fa tsy ilay hatsaran'ny vanim-potoana teo aloha. “
Misy fiantraikany mivantana amin'ny hatsaran'ny sarimihetsika ataony ny zavatra iainany manokana, hoy i Karimi. “Krizy no iainako. Amin'ny maha-olona miatrika sazy am-ponja, tsy afaka nandray fanapahan-kevitra momba ny hoaviko aho, ary mbola tsy afaka hatramin'izao…. Manomboka manodidina ny amin'ny 3 na 4 ora tolakandro ny androko, rehefa azoko antoka fa tsy misy mpitsikilo mitady ahy. Miroborobo ao anatin'izany toe-javatra izany ny tahotra diso tafahoatra.
“Nisy fiantraikany tamin'ny endriky ny sarimihetsika ataoko izany toetran'ny krizy izany. Nanova ny zava-drehetra ny fahafantarana fa 17 andro fotsiny no fahazoan-dalana hakako sary. Indraindray ianao tsy maintsy maka sary kanefa tsy afaka manohy. Tsy afaka mandrakitra fifanakalozan-kevitra, ka tsy maintsy mametraka ny feo rehetra ao anatin'ny dingana fanangaroam-peo—tsy misy ny feo voajanahary ao amin'ny horonantsary. Nieritreritra aho raha avelan'izy ireo manomboka manitsy aho, dia hanao zavatra vaovao momba ny feo. Ary namorona zava-baovao aho. Sarimihetsika ahitana seho 84 tsy misy fahatapahana. “
Tsy mametraka ny zava-niainany ho tantara mahasondriana i Karimi. Mandravona azy ho ren'izao tontolo izao izy, manondro ny fitoviana eo amin'ny Tandrefana sy ny ambiny eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. “Izaho no ambiny,” hoy izy, manondro ny tsy ampoizina amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fanjakana anjakazakan'ny polisy, fepetra izay efa mahazatra anay rehetra, ka misy fiantraikany amin'ny fomba fanatontosanay horonan-tsary.
Ho an'i Karimi, noho izany, dia tahaka ny artista graffiti ny tale, ary mpandika lalàna tsy ary fitaovana hanaovana hosodoko manara-penitra, ary hita taratra tamin'ny fanatontosana azy ny fepetra niainana tamin'ny famokarana azy. Amin'ny alalan'ny asany, manasa antsika izy mba hahafantatra ny toetry ny krizy iainanay, mba hanohitra amin'ny fomba vaovao ny fameperana apetrak'izany fanjakana izany.
Mahdi Ganjavi dia mpianatra Ph.D. ao amin'ny departemantan'ny Fitantanana, Fampianarana Ambony sy ho an'ny Olon-dehibe ao amin'ny Oniversiten'i Toronto. Ny lahatsoratra sy ny fanadihadiany dia efa nivoaka tao amin'ny Gazety Iraisampirenena momba ny Fampianarana Mandavataona. Encyclopedia Iranica, ny Bullet, Radio-Zamaneh sy ny Fikambanan'ny Media Ajam .